Kuzoshintsha izinto kwi-Kaizer Chiefs | News24
Kuzoshintsha izinto kwi-Kaizer Chiefs
U-Brilliant Khuzwayo obengunozinti we-Kaizer Chiefs kodwa osekhonjwe indlela wayojoyina i-Orlando Pirates.ISITHOMBE: INTERNET
ZININGI izinguquko noshintsho oluzonkwenzeka ekilabhini iKaizer Chiefs ngaphambi kokuqala kwesizini.
Lokhu kubonakale sekuqalile ngesonto eledlule ngesikhathi izikhulu zaMakhosi zikhomba indlela abadlali abangasadingeki noma abanga setshenziswanga emasizini edlule.
Ebadlalini abasanda kukhonjwa indlela kubalwa uTsepo Masilela, u-Emmanuel Letlotlo kanye no-Brilliant Khuzwayo nosejoyine iqembu le- iOrlando Pirates.
Kanti izembe ebeligawula libuye lawela nako-William Thwala nokade ebolekwe yi-Maritzburg United, u-Edmore Chirambandare, u-Keagan Buchanan kanye nomdlali wase muva uSibusiso Khumalo.
Kanti isikhulu esibhekene nokusayiniswa kwabadlali kwi-Chiefs uBobby Motaung ukuqinisekile ukuthi labadlali bakhululiwe ngoba abaqeqeshi bebengabasebenzisi nalokho okuchaza ukuthi abasadingeki.
UMotaung uthi labadlali bangabadlali ngempela nabanetalente kodwa okwaba buhlungu ukuthi nje ngesikhathi befika eKhosini bahluleka ukuhlala besefomini engaheha abaqeqeshi nokwakungenza basetshenziswe.
“Akuwona umqondo ophusile ukuqhubeka nokugodla abadlali abanethalente kodwa ube ungabasebenzisi. Ukuba nika ithuba lokuyozama inhlanhla kwamanye amaqembu kwi-PSL kuzobasiza kakhulu ngoba phela bangadlala yinoma kuliphi iqembu.
“Thina njenge qembu le-Kaizer Chiefs sibafisela inhlanhla ngekusasa labo.
“Mangisho futhi ngingananazi ukuthi labadlali basemgangathweni futhi-ke ngeke babe nenkinga ukudlalela noma yiliphi iqembu,” kusho uMotaung.
UMotaung ubuye wavuma ukuthi basabambe izingxoxo zokuthi baboleke u-Emmanuel Letlotlo elinye lamaqembu.
Lesikhulu siphinde sakuqinisa ukuthi iqembu alisalali lihlwaya umqeqeshi omusha nabadlali abambalwa abasha nokuzokwenzeka ezinsukwini ezimbalwa ezizayo.
“Khona akuwona umsebenzi olula. Sizokhumbula ukuthi kuleminyaka noma amasizini esiphuma kuwona bekungekuhle. Ubumnandi bebungekho ngoba phela sonke siyazi ukuthi abalandeli bathokoziswa ukuwina izindebe.
“Sifuna umqeqeshi nabadlali abasemgangathweni.
Khona akusekude siwuphothule lomsebenzi ngoba phela isizini entsha izoqala emasontweni amabili ezayo kanti kuyofanele ukuthi sibe sesiqedile ukuhlanganisa zonke izinto,” kusho uMotaung.